Ekoatora : Matavilela, Literatiora Iray Hafa Ho “Famonoana Andro” · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Harry Hogue
Voadika ny 28 Jona 2018 7:25 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Oktobra 2013)
Ekipa mpanoratra ao amin'ny Matavilela
Fanamarihan'ny Rising Voices : Ampahany amin'ireo lahatsoratra maromaro manasongadina ny tetikasan'ireo mpandray anjara avy amin'ilay fivoriana “Conectándonos” (Mampifandray antsika) nokarakarain'ny RV avy ao Bolivia, Però, ary Ekoatora ny taona 2011-2013 ity lahatsoratra ity. Ny tanjon'ireny atrikasa ireny dia ny hanampy amin'ny famolavolana mpitarika vaovao avy ao anatin'ny vondrom-piarahamonina tsy hita firy loatra ety anaty aterineto, ary koa hanamafisana ireo tambajotra sy fifanakalozana eo amin'ireo tanora mpampiasa media dizitaly ho an'ny fiovàna sosialy.
Mitondra any amin'ny pejy amin'ny teny Espaniôla avokoa ny rohy rehetra , afatsy ireo misy fanamarihana manokana.
Vondrona mpianatra iray avy ao amin'ny Oniversite Katolikan'i Guayaquil ao Ekoatora no nanapa-kevitra ny hanome ny anaran'ilay gazetiboky nomerika amin'ny anarana hoe Matavilela, teny avy ao amin'ilay sombin-tantara “El Rincón de los Justos” nosoratan'ilay Ekoatoriàna mpanoratra, Jorge Velasco Mackenzie, izay midika hoe “Mamono fiainana.” Na mety hampidi-doza aza izany ho an'ny mana-pahaizana iray momba ny varotra, manamarina ilay anarana ireo mpamorona ilay gazetiboky nomerika, manazava fa ny tanjona dia ny hanolotra safidy ho an'ny mpamaky ho “Famonoana fiainana banga” [na fotoana], izany hoe mba hanilihana ny fotoana malalaka sy ireo ora tsy misy atao- ka tolokevitr'reo mpianatra ny hanaovana izany amin'ny vakiboky fitsikeràna.
Manasongadina manokana ny andran-dahatsoratra ilay gazetiboky nomerika, saingy misy ihany koa ny sehatra “tafatafa” miaraka amin'ny endrika manokana antsoina hoe #MataPreguntas (#KillerQuestions) na Fanontaniana mahafaty, fanontaniana niarahan'ireo mpanoratra avy ao an-toerana sy mpanoratra iraisam-pirenena namolavola, isan'izany i Rosa Montero, José Ovejero, Diego Fonseca ary Andrés Neuman. Tsy nisy mpamaky ny Matavilela tamin'ny fanombohany, fa saingy nahaforona iray izy, tamin'ny fanantenana ny hametraka ilay gazetiboky ho anaty lasitra iray ara-kolontsaina sy ara-literatiora manerana an'i Amerika Latina.
Anisan'ireo hetsika novokarina hatreto tao amin'ny Matavilela ny antso ho an'ireo mpanoratra nampitondraina ny lohateny hoe “Guayaquil Guacharnaco,” mba hiresaka momba ny fanorenana ny tanànan'i Guayaquil, ary ny fomba nampiasana azy tanaty literatiora. Araka ny voalazan'i Daniel Lucas, ilay mpandrindra ny tranonkalan'ny Matavilela, nahomby ny antso natao, nahitàna ireo mpandray anjara nanome ny heviny momba ilay tanàna.
Lucas, 29 taona, dia miaiky fa tsy mora ny mifehy ny fikambanana ara-kolontsaina tsy miankina tahaka ny Matavilela, “indrindra ao amin'ny firenena izay tsy mamaky boky loatra ny olona, toa an'i Ekoatora, ary ahitàna ny tahan'ny fahantrana ambony dia ambony.” Na dia tsy manana mpanohana aza izy ireo amin'izao fotoana izao, nilaza i Lucas fa manao izay mety noho ny fitiavana ny zavakanto ireo mpirotsaka an-tsitrapo ao, araky ny tenin'ilay mpandray anjara iray, “ho an'ny fitiavana Akanjo bà.”
“Avy amin'ny akademia sy ny aterineto izahay, avy amin'ny literatiora Ekoatoriàna ho an'ny literatiora manerantany, ” hoy ny tranonkalan'ny Matavilela.
Ankoatra ny maha mpandrindra ny tranonkalan'ny Matavilela azy, dia manoratra lahatsoratra sy tafatafa ihany koa i Lucas; Mianatra momba ny fifandraisana mirona mankany amin'ny literatiora izy ary faly noho ny faneken'ireo mpampianatra ny lohahevitry ny fanohanam-pikarohany mikasika ny asa soratr'i Huilo Ruales, mpanoratra Quito. Mpandray anjara tamin'ilay Conectándonos Ecuador ihany koa i Lucas, hetsika nokarakarain'ny Rising Voices ary novolavolaina tao Loja [en], atsimon'i Ekoatora, tao amin'ny Loja Particular Technical University na ny Anjerimanontolo Teknikan'i Loja.
Ho an'i Lucas, ny fianarana lehibe indrindra azony tamin'ny fandraisany anjara tamin'ilay Conectándonos dia ilay atrikasa iray momba ny fitantanana ireo kaontinà andrimpanjakàna ao amin'ny Twitter, ary ny fomba atao hampandehanana ny aterineto ho anao miaraka amin'ny fitaovana dizitaly IFTTT [en] (raha izay ilay izy).
Ny fandraisana anjara amin'ny Connecting Us no nahafahan'i Daniel Lucas nanatsara ny asany amin'ny maha mpandrindra tranonkala azy tao amin'ny Matavilela sy namoronany tambajotra ho an'ireo mafana fo anaty aterneto. Sary nahazoana alalana avy amin'ny Flickr: calu777 (CC BY 2.0)
“Ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny fitantanana kaontinà andrimpanjakàna anaty Twitter dia ny fahafahana mitantana ireo mombamomba ny olona mba hahafahan'ireo hafa mahalala fa tena misy olona ao ambadik'ireny mombamomba azy ireny, izany hoe tsy tokony hitovy amin'ny milina ny bitsika, fa tokony ho toy ny olona ,” hoy izy. Ankoatra izany, “ny tetika ahazoana mpanaradia mismisy kokoa dia ny fianisàna ireo mpampiasa hafa, hoy izy. Ohatra, ‘araka ny voalazan'i @talcual, misy afo eraky ny arabe.’
Nanenina i Lucas tamin'ny tsy nianarany misimisy momba ny fitaovana nomerika tany amin'ny oniversite, ary nasehony anay ny rakitra nianarany ny fomba famoronana avy amin'ny Conectándonos, satria ny fandraisany anjara tao no nitarika azy hanatsara ny fahaizamanaony eo amin'ny sehatry ny fitantanana tranonkala sy tambajotra sosialy. Ampiharin'i Lucas amin'ny andraikiny amin'ny maha-mpandrindra ny tranokalan'i Matavilela ankehitriny ny zavatra nianarany.
Fitaovana iray hafa izay nianaran'i Lucas nampiasaina tao amin'ny Conectándonos ny IFTTT [en]. Nambaran'i Lucas fa ampiasainy io fitaovana io ao amin'ny Matavilela hamoahana avy hatrany ny hetsika ao amin'ny Facebook. Ny IFTTT koa no dia manome azy fahafahana hitantana kaonty marobe, toy ny HootSuite, saingy tsara kokoa, satria afaka mitantana kaonty 40 amin'ny alalan'io sehatra io izy.
Nanazava ihany koa i Lucas fa nampihatra ny fahalalany tao amin'ny Twitter izy mba hanaovany fanadihadiana, tamin'ny fanontaniany ireo 500 mahery mpanaraka azy , momba ny mpanoratra tian'izy ireo indrindra ary nanasa azy ireo hanoratra tsonga avy aminà teninà mpanoratra.
Nandritra ny fotoana nandraisany anjara, tsy momba ny fitaovana dizitaly ihany no nianaran'i Lucas fa koa nahavita namorona tambajotranà mpikatroka izay nifanakalozany traikefa sy hevitra. Manantena izy ireo amin'izao fotoana izao ny hiara-hiasa hitondra ny fikatrohana sosialy amin'ny sehatry ny tontolo iainana, sosialy ary ireo lohahevitra politika ho ety anaty aterineto.
Kendren'ireo hetsika Conectándonos ny handrisika ny fampidirana sy ny fampandraisana anjara an'ireo vondrona tsy misy mpisolotena loatra eny anaty habaka nomerika Ekoatoriana. Misy hetsika avy amin'ity andiany ity koa ao Bolivia sy Però, natao hampihenana ny hantsana nomerika. Ao Loja, ilay foiben-toeran'ny fivoriana ao Ekoatora, telopolo ireo mpikatroka no nofanin'ireo fikambanana sivily sy ara-kolontsaina maro samihafa avy amin'ny faritra maro tao amin'ny firenena momba ny hetsika anaty aterneto, ny fanentanana amin'ny fiovàna ara-sosialy anaty Facebook ary ny fitaovana amin'ny tranonkala sosialy toy ny Twitter, wikis, sy ireo bilaogy.